MOETHIHAAUNG: အခွင့်အရေးယူတောင်းဆိုလာတဲ့ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီတို့ရဲ့ ရာဇသံ ၂၁ ချက်
အခွင့်အရေးယူတောင်းဆိုလာတဲ့ ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီတို့ရဲ့ ရာဇသံ ၂၁ ချက်
1. All he Rohingya people will have to give them compulsory civil rights and we have to retum them without giving any conditions on behalf of the Burmese government.
၁။ ရိုဟင်ဂျာတို့ကို နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝ ပေးရပါမယ်။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်များ မထားဘဲ ရိုဟင်ဂျာများ အိမ်ပြန်လာနိုင်ရေးကို ခွင့်ပြုရမည်။
2 Security must be provided before Rohingyas can be taken back home.
၂။ ရိုဟင်ဂျာများ အိမ်ပြန်လာနိုင်ရေး အတွက် လုံခြုံရေး ပေးရမည်။
3. Offically, the Rohingyas who have been burnt by fire have to pay their full compensation.
၃။ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွား သော နေအိမ်များအတွက် တရားဝင် လျော်ကြေးငွေ အပြည့်အဝ ပေးရမည်။
4. Rohingyas will have to give rights to all education.
၄။ ရိုဟင်ဂျာများကို ပညာရေးအခွင့်အရေး အားလုံး ပေးရမည်။
5. Rohingyas will have to return the land and property on paper without any conditions.
၅။ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မှ မရှိဘဲ ရိုဟင်ဂျာများ၏ မြေယာနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ကို စာရွက်စာတန်းဖြင့် အတည်ပြု ပေးရ မည်။
6. The Rohingyas will have to give the old name Arakan State.
၆။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အမည်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ အာရကန်ပြည်နယ် ဟု အမည်ပေးရမည်။
7. Rohngyas will have to give free trade rights and security of trade goods.
၇။ ရိုဟင်ဂျာတို့ကို လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ခွင့်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် လုံခြုံရေး ပေးရမည်။
8. Separate judical system for the Rohingya in Arakan Judge, the magistrate has to pay the Rohingya.
၈။ ရခိုင်ပြည်နယ် တရားစီရင်ရေးတွင် ရိုဟင်ဂျာများအတွက် သီးခြားတရား စီရင်ရေးစနစ် ထားပေးရမည်။ တရားသူကြီးများကို ရိုဟင်ဂျာများကို ခန့်ထားရမည်။
9. Holding the Rohingya prisoners and imprisoning them in jail, day after day, they will have to leave their conditional and have to set up separate jail for Arakan for Rohingyas .
၉။ ရိုဟင်ဂျာအကျဉ်းသားများသည် ပြစ်ဒဏ်လွတ်မြောက်နိုင်သော အခြေအနေများ ရှိသည့်အတွက် အာရကန်ပြည်နယ်မှာ သီးခြားအကျဉ်း ထောင် ထူထောင်ပေးရမည်။
10.The establishment ofaseparate Muslim Ministry for Rohingyas.
၁၀။ ရိုဟင်ဂျာများအတွက် သီးခြား မွတ်စ်လင်ဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းပေး ရမည်။
11. Any NGOs will not be allowed, to allow foreign and foreign journalists to enter Arakan as well as to prevent their own TV channel running.
၁၁။ ပြည်တွင်း NGOs များကို အာရကနမပြည်နယ်အတွင်းသို့ ဝင်ခွင့်မပြုဘဲ နိုင်ငံခြားNGOs များနှင့် သတင်းထောက်များကိုသာ ဝင်ခွင့်ပြုပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာတီဗီရုပ်သံလိုင်း ထုတ်လွှင့်မှုကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့ ခွင့်ပြုခွင့်ပြုရမည်။
12. The weapon and bombs that were given at the homes of the Buddhist people living in Arakan lands will be fully returned.
၁၂။ အာရကန်ပြည်နယ်အတွင်းနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ နေအိမ်များမှာ ပေးထားသော လက်နက်နှင့်ဗုံးများကို အပြည့်အဝ ပြန်လည်သိမ်းဆည်း ပေးရမည်။
13. The genocide of women raped and secretly revealed to the youth of Rohingya women over the ages has to be tried in the International Court of Justice.
၁၃။ နှစ်များစွာကတည်းက ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်မှု၊ အမျိုးသမီးများကို အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့် ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များအပေါ် လျှို့ဝှက်တရားစီရင်ခဲ့မှုများအတွက် နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုဖို့ ကြိုးစားမှုကို ခွင့်ပြုရမည်။
14. For Rohingyas, the OIC and UN peacekeeping force must be assigned to the police station in every thana.
14 ရိုဟင်ဂျာများအတွက် OIC နှင့် ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ များကို ရဲစခန်းတွင် တာဝန်ပေး အပ်ထားရမည်။
15. All religious establishment including mosque tadrasa Madrasa Maktab Tabli's dead body must be set up for the Rohingya mosque.
၁၅။ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ ဖြစ်တဲ့ ဗလီများ၊ ရိုဟင်ဂျာအလောင်းရုံများကို တည်ဆောက်ပေးရမည်။
16. Rohingyas will be given Jobs in all government departments. All students, including teachers and students, will have to give rights.
၁၆။ ရိုဟင်ဂျာများ အား အစိုးရဌာနအားလုံးတွင် တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။ ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအပါအဝင်အားလုံးကျောင်းသားများ, လူ့အခွင့်အရေးပေးရပါလိမ့်မယ်။
17. Rohingya have the right to move from anywhere in Arakan and Burma to anywhere.
၁၇။ ရိုဟင်ဂျာများကို အာရကန်ပြည်နယ်နှင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်နေရာမဆို သွားလာခွင့် ပြုရမည်။
18 Rohingyas will have to arrangeavisa for their own country. Passport offices must be in Arakan and Rohingyas will have the opportunity to go abroad.
၁၈။ ရိုဟင်ဂျာများကို သူတို့နိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ စီစဉ်ခွင့် ပေးရမည်။
ရိုဟင်ဂျာများ ပြည်ပ ထွက်ခွာနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပတ်စ်ပို့ရုံးကို အာရကန်ပြည်နယ်မှာ ဖွင့်လှစ်ရမည်။
19. Without any case, any army including the district police will not be able to enter the name of Rohingya in the name of the Rohingya.
19. မည်သည့်ကိစ္စအကြောင်းထူးမရှိရင် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင် မည်သည့်စစ်တပ်မဆို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး၏ အမည်တွင် ရိုဟင်ဂျာ၏အမည်ကို မသုံးစေရ။
20. Do not obstruct the wearing of pajama hat in the Rohingya Alem Ullamas, besides preventing religious activities.
20. ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုများ တားဆီးမှုမှတပါး ရိုဟင်ဂျာများ pajama ဝတ်ဆင်မှု၊ ဦးထုတ်ဆင်မှုကို မတားဆီရ။
21. There will be not compensation for the cattle poultry rearing.
၂၁။ နွား၊ ကြက် မွေးမြူရေးများအတွက် လျော်ကြေးငွေမရှိစေရ။
Posted by Myo Lwin Aung at 2:53 PM
Labels:အတိတ်က မြိတ်သမိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်